Tadiom-pitiavana | FIZARANA 5
- "Mandrosoa Tatie, mandrosoa dia mipetrapetraha!"
- "Ie, handroso tokoa moa izany! andray akia izany hatsaran’ny biraon-driako! tena mahafinaritra be sady manaraka ny tsara toetr’andro ankehitriny an! Tena lafatra, hita mihitsy hoe avy any Amerika!"
- "Tatie ity koa, manao ahoana aloha e ! mahazo mifampiantso amin’ny anarana ve isika e?"
- "Ie ! tsy mampaninona, rehefa eo amin’ny fianakaviana ihany no tokony hifampiantso Tatie, satria manjary manakorotan-javatra, sady isika koa ange tsy dia mifanalavitra taona e! Na dia zokin-dry lavidavitra kely aza aho, niara-nilalao ange tamin’ny mbola kely e! ahatsiarovako lehilahy iray… ha, ha, ha !!!"
- "Fa inona aloha no anton-dian’i Tahiana e? Misy vaovao matoa tonga aty!"
tena misy mihitsy ary tsy nampoiziko aza! Hay ve indry ty ka niara-nianatra tamin’i Hery e! Aiza moa no ahafantarako izany fa dia nifankahita tampoka tao alatrano tao izahay."
- "Niara-nianatra foana aza izahay hatrany amin’ny kilasy famaranana fa nony afaka bacc dia samy nanana ny nalehany ka atao ahoana! Fa maninona no mahaliana be an’i Tahiana izany?"
- "Ka mikasika izay mihitsy ange akia no tiako nandehanana aty amin-dry aty e!
Aleo tonga dia tsoriko akia ny resaka ry Nomena an, ary tsy miolakolaka intsony aho iny akia no hitako fa mety ho sahaza ho an-dry an!"
Nitaraina tamiko ange ny renin-dry hoe mba hitadiavo namana any hono indry fa sao dia hiafara tahaka anareo sy Manitra eo koa. Dia iny akia no hitako an, ary tena tolo-janahary mihitsy fa hay efa mifankafantatra ianareo roa! Tena mety mihitsy."
- "Fa ahoana aloha ny momba anareo e! Mbola hanao mademôzely be eny ihany ve ianareo mirahavavy sa efa misy mikasakasa?" hoy i Mihary mody nanodina ny resaka.
- "Ka izay indrindra, misy akia any an! sady mety tsara ho ahy, fa izany hoe: mbola tsy azo 100% fa andalana e! ary ny tena zavatra dia izao: rahalahin-dRain’i Hery iny ange ilay izy e! dia lasalasa akia ny saiko, raha toa ka indry no mba tiako hiaraka amin’i Hery an! Indry ange izany tsy atoro intsony fa hay efa fantatr’indriako tsara izy, he izany izy hoe mpiara-nianatra! Ka misy ohatr’izany indray ve. Sao dia efa miaraka kosa ary aloha ianareo fa izaho no lany rora mampiditra eto fotsiny."
- "Fa ahoana kosa ary no ialazan’i Tah… an’izany e!"
- "Ka maninona aty amin’ny biraon-driako ary izy, sa marary mila fitsaboana, sao dia voan’ny … SIDA," hoy i Tahiana somary niahotra.
- "An an an ! tsy misy an’izany ka, fa aleo hipetraka anatin’ny tsiambaratelon’ny asa fa manjary manahirana."
Fa marina tokoa izany, i Tah… koa ange toa mahalala an-dry zareo tsara mihitsy e ! Fa taiza marina aloha no nifankahalalanareo?"
Sadaikatra ihany i Tahiana, nitady izay havaly.
- "…Sendra nandalo tao amin’ny farmasia akia izy fa niandry raharaha izahay tamin’izay an ! Dia… tena … sshhh, tantara lava akia izany an ! fa ny andro koa moa ity efa miha-maizina, tsy aleo ve mba eny an-dalana isika no manohy ny resaka e!"
- "Fa angaha moa i Hery tsy efa vita fisehoana tany ho any e?" hoy i Mihary nanamafy.
- "Mampalahelo ahy ange izy iny fa toa tsy tia azy akory izay fofombadiny izay e ! Sady mety hahitany olana be dia be akia an ! Tadidio fa tsy hanolo-bato mafana andry mihitsy aho akory."
- "Eny e ! misaotra amin’ny tolo-kevitra fa misy hosaintsainina izany!
efa hariva marina ny andro fa tsy aleo ve ny lalana mody no asiana olona tokoa."
« Mody miala bala indray ikala Tah… fa mitady hitifitra azy ny marina, tsy azony an-tsaina mihitsy ny fahafantarako ny zava-mitranga », hoy i Mihary tany an-tsainy tany, « ity izy mitady hiditra amin’ny fianakavian-dry Hery koa no loza, tsy ho lasa amboadia mitafy hodi-janak’ondry ve? Mila mitandrina ianao ry Hery fa sarotra foana ny lalanao, jereo ity nataony tamin’ny voalohany teo, tahaka ny olona mpifankatia ireny izy roa, ny fanalan’i Hery ny tanany vao nisokatra ny varavarana marina,! mbola amin’ny fotoana manaraka no hamatsimpatsihako an'ity Tahiana ity, dia tena tsy niova mihitsy fa mandangolango eny foana, tsy mahay mifikitra amin’izay hananana fa mitady etsy, mitady eroa. Nahita ianao ry hery, nahita iny vehivavy iny fa mitandrema !»
Nanidy ny biraony i Mihary dia niara-nivoaka ilay trano lehibe izy mirahavavy mianaka.
Teny an-dalana dia tsy naharitra intsony i Tahiana fa nilaza hoe
- "Izao akia ry Mihary an ! Manana olana ara-pitiavana goavana be mihitsy i Hery, ary matoa aho nanatona an-dry dia fantaro fa mety hitondra vahaolana aminy mihitsy ny fisian-dry. Ary ianareo moa mifankafantatra dia vao mainka tsara. Asa, mety efa mahalala izay tantara marina in-dry fa raha tena mila fanazavàna lalindalina kokoa dia mankanesa any an-tranoko e! Mila vahana maika mantsy izy olany izay. Izay fa eto isika mianaka no misaraka, veloma Nomena an!"
Nandefa eritreritra lalina i Mihary ambara pahatongany tany aminy, sarotra ary anisan’ny sarotra raha izao olana mitranga amin’i Hery izao, mifamatopatotra be daholo ny trangan-javatra rehetra, ny fanapahan-kevitra mety azo raisina toa mety handamoka indraindray.
Fa tany an-dafin-dranomasina kosa tamin’io fotoana io :
- "Malala an ! Malala an ! naninona ianao izany e? hoy i Mahefa nihazakazaka nidina ny tohatra. Nikoropaka izy nahita an'i Malala nitsirara teo amin'ny gorodona. Nareniny moramora aloha ity vehivavy sady nahankiny tamin’ny tratrany. Tsy nahatsiaro tena tanteraka i Malala. I Alexia koa anefa any ambony rihana mbola tahaka izany koa. Fa inona loatra ary ity miseho ity hoy Mahefa nanontany tena. - "Malala an ! fa naninona tampoka teo ianao e!" Sady nokosikosehiny aloha ny tanany, dia nobatainy avy eo haka toerana teo ambony seza lava.
- "Inona indray ary ity mitranga ity!" Noraisin’i Mahefa ny findainy, nantsoiny aloha i Tojo…
- "Tojo an ! tongava aty an-tranoko izao dia izao aloha ise fa tena mila fanampiana maika dia maika aho."
- "Fa misy inona Profesora ? … tsy azoko…"
- "Haingàna ise fa mila an’ise maika dia maika mihitsy aho izao e!"
- "Eny e ! ho avy aho" hoy i Tojo namaly tsy sazoko tamin'ity fiangaviana toa miharo baiko ny hahatongavany.
Nandinika kely aloha i Mahefa amin’ity mahazo azy mianaka, mbola teny an-tratrany ny fitsapàna marary dia nohenoiny tsara ny fitempon’ny fon’i Malala, mbola tsy misy atahorana aloha, soa fa efa vitany ny nampatory ny zazakely fa raha tsy izany…
" Fanina tampoka izy izany, asa izay nahazo azy tampoka teo, ilay niaka-nidina tamin’ny tohatra angamba, nefa… Tsy dia tena misy atahorana kokoa ny reniny noho ny zanany, ny vokatr’ilay fianjerany teo no tsy fantatra. I Alexia nefa tsy maintsy jerena koa. "
Niakatra vetivety izy rehefa avy nandrakotra lamba an’i Malala,
Indro i Alexia mbola tsy mahatsiaro izay ambonin’ny tany, natsofony tamin’ny sandriny ny fitsapàna tosi-drà dia nojereny, ambanimbany ihany fa mbola azo itokisana tsara.
Very hevitra teo i Mahefa, ny amin’ny tokony hataony,
"Ho entina any amin’ny Hopitaly ve izy mianaka, dia ahoana ny ankizy kely. I Malala koa mbola mitaiza, dia ahoana ?
Aleo aho hiantso ilay mpitsabo namako hoy izy aneritreritra d ho hita eo izay hatao. I Ratrema kosa aloha dia tsy azo antsoina mihitsy amin'izao e. Asa izay hahazo azy. Izaho anefa efa nampanantena ny hilaza vaovao aminy.
Olana goavana koa ity, hitako ny namana aman-tsakaiza mpiray tanindrazana no somary mihisatrisatra rehefa mandray ny havany mandritra ny fotoana maharitraritra. Hay moa ny mba tsy hisian’ny toy izao. Atao ahoana moa fa zanaky ny tena ve holavina, zara aza mba natolotr’Andriamanitra ahy ity zanako ity. "
Nantsoiny ilay mpitsabo vazaha namany sady nazavainy izay mitranga.
Nidina izy avy eo, nijery an’i Malala indray, vao noraisiny ny tanany dia nanomboka nihetsiketsika kely ny hodimason'i Malala ary nisokatra moramora nony avy !
- "Hery!" hoy ny tenin’i Malala voalohany. Dia tsy nahateny intsony izy fa i Mahefa fotsiny no nobanjininy tsara.
- "Malala an ! Aleo aloha tsapaiko ny tosi-dranao, soa fa taitra ihany ianao !
-Fa aiza i Hery? i Hery, aiza izy izay?
- "Malala an! aza mbola mandefa saina lavitra aloha fa manjary hamizana anao fotsiny an! Izay!"
injay fa nisy nandondona tao am-baravarana.
-« Entrez ! » hoy i Mahefa, « c’est ouvert ! »
Dia iny i Tojo, niditra ny trano, toa kaodikaody, nangarangarana aloha, nijery, taitra tampoka nahitan’i Malala matory eo ambony seza lava nefa tsapain’i Profesora ny tosi-drany.
- "Fa nisy inona Profesora?" sady nanatona ny tovolahy no niarahaba.
- "Aza mbola be fanontaniana aloha ise fa aleo i Malala entina miakatra any ambony, mbola tena vizana be izy ka tsy hay raha hahazaka tena."
- "Mila bataina izany?"
- "Aleo aloha andrasana kely hahazo aina tsara izy dia entina miakatra rehefa avy eo! Sady ho avy koa ilay dokotera namako dia aleo any izy no zahana. Mbola amin’izay no ahafantarana raha tokony hitondra azy mainaka any amin’ny hopitaly isika!"
- "Fa izy mianaka iza moa ry Profesora, ilay zananany menavava ve? "
- "Aza taitaitra aloha ise e!" hoy i Mahefa nahita an’i Tojo toa hendratrendratra be ihany, " i Malala sy Alexia no tiako holazaina, nefa mety hanahirana be satria izy mianadahy kely mbola taizaina."
- "Malala an ! entinay sy Tojo hiakatra ianao an! miandry kelikely fotsiny."
- "Io ry ise an! tsy tonga dia zakan’ise hotrotroina ve izy amin’izao!"
Nobatain’i Tojo i Malala, tonga dia nataony teo an-tratrany, avy hatrany dia nentiny niakatra sady nanaraka an’i Mahefa tao aoriana koa izy. Nitombo ihany ny fahatairany mahita an’i Alexia hatsatra dia hatsatra toa tsy mahatsiaro tena eo ambony fandriana.
- " Aleko mhitsy ry ise izy mianaka no hiray fandriana eto aloha alohan’ny hahatongavan’ilay dokotera an!"
Nipetraka teo akaikin’i Alexia indray i Mahefa sady namoaka fanafody tany am-paosiny tany. Rehefa nampandriana tsara kosa i Malala dia norakofana lamba hahazo hafanana. I Tojo no nampandry azy, ilay fandriana rahateo moa be velarana fa afaka natorian’izy mianaka tsara ;
Vao nitohoka teo amin’ny oron’i Alexia ilay fanafody mani-pofona dia nanaomboka nitsirempirempy ny masony, somary nisokatra kely sady nihamafifamy ny fisefony.
- "Papa! papa an!"
- "Efa eto aho izany zanako izany! aza mbola miteny betsaka aloha an!" hoy i Mahefa nampitony an’i Alexia, sady nanarina azy hiankina eo an-tratrany.
- "Mbola ato ve aho, sa mbola nofiko ihany izao!"
- "Tsia anaka, natory lalina ianao teo fa efa mifoha tsara izao!"
- "Tojo an ! hoy i Mahefa, andana ange ry ise, mba raofy ilay vazy vaky ao ambany io fa sao dia handratra olona e!"
- " Eny tompoko," hoy i Tojo tsy nisalasala, tsy tian’i Mahefa ho fantany koa izay tena mitranga fa naleony naniraka azy hiala teo. I Malala toa tsy nanana aina na dia ny hitenenana aza fa dia nipitrapitra fotsiny.
- "Tena marina ve fa ianao no ray niteraka ahy?"
- "Alexia an! aza mbola mieritreritra izany aloha fa mbola vizana be ianao!"
- "Tena nanofy aho sady faly nahare ilay izy! nofiko fa i Papa hono no nilaza tamiko hoe ity ny ray niteraka anao anaka! Avy aminy no nipoiranao fa izaho nirahin’Andriamanitra nitaiza anao fotsiny! dia nampian’i Papa hoe Dada no iantsoanao azy manomboka izao! dia hafaliana moa ny ahy, sady notoloran’ilay raiko ranomanitra aho, dia tsy fantatro intsony fa … Dada an ! menatra be anao aho, tena menatra mihitsy, raha fantatro mialoha izany dia tsy nanao ny tahaka ireny aho!"
- "Aza malahelo amin’izany ny fonao anaka, izaho eto mikarakara anao!
Tsy misy maninona an! Tsy misy maharary ny an-doha na zavatra hafa ! Ary sao dia mahatsiaro maharary ny faritra nodidiana."
- "Mahatsiaro reraka fotsiny aho, somary taitra ihany fa efa tsy dia maninona izao."
- "Izay fa tonga ilay dokotera namako," hoy i Mahefa.
Nampatoriany teo ambony ondana aloha ity zanany, dia nitsangana izy niteny tamin’i Tojo hamoha ny varavarana sy hampiakatra ilay dokotera.
Vao tafiditra ny efitra dia nifampiresaka izy roalahy. Nazavain’i Mahefa izay nitranga, ary nanontany izy raha tokony entina hiverina any amin’ny hopitaly izy mianaka.
Nataony avokoa aloha ny fitsapana rehetra, indrindra teo amin’ny faritra nodidiana tamin’i Alexia, dia afaka kelikely izy niteny hoe:
- "Tu vois mon cher confrère, elles ont reçu un choc, mais vu que : elles se sont reveillées aussitôt, et toi aussi qui est toubib dans la maison, je n’y vois pas l’inconvenient de rester ici ! en tout cas, il sera bientôt Noël, on aime tous être chez soi n’est-ce pas les filles ? hoy ilay dokotera somary nananihany.
Nitsikitsiky fotsiny i Alexia, i Malala kosa tsy nahateny na dia indraim-bava aza.
- "tu vois Mahefa ce que tu vas faire ?… en tout cas, je vous rassure que tout ira bien les filles, et soyez sans crainte, ce n’était qu’un petit malaise, alors, joyeux Noël à tous et à toutes. "
Lasa nidina ilay dokotera, sady naterin’i Mahefa tao am-baravarana.
Vao tafaverina nefa izy dia indro i Malala niverina nitomany :
- "Mahefa sy Alexia an ! malahelo loatra ny any Antananarivo aho, te-hody mafy mihitsy. Te-hody any an-tranoko aho e ! Mahatsiaro irery loatra aho aty !
Sady nitohy hatrany ny fidradradradrany. Raha ny tiany aloha dia ny hiantsoantso hoe Hery an ! aiza ianao e !
Voatery nampangiana an’i Malala indray i Mahefa, vao nahare izany koa i Tojo dia niakatra nefa toa tsy nahoan’i Malala akory. Voatery nobataina tany an’efitrano hafa, lavitry ny ankizy kely ary soa ihany fa mbola matory tsara.
Dia tao i Tojo nanao izay faraheriny hampitony ity malalany.
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 5:: Hametraka hevitra (0) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
- "Mipetrapetraha ianao ry Hery…"
Naka ny sezany koa i Mihary dia nandray taratasy fotsy. I Hery koa variana mijery ny manodidina azy aloha. Efitra fizahana marary fa dia milamina aok’izany.
- "Dia nanao ahoana ry Hery an ! Inona avy ary ny vaovaonao?"
- "Inona moa no tokony hambarako aminao fa ny tena zava-dehibe dia nanoratra mailaka tamiko i Alexia."
- "Hay," hoy i Mihary somary gaga.
- "Tena hafaliana moa ny ahy, sady daty vao afakomaly mihitsy. Tena faly aho ry Mihary an! raha tsy izany aho ve raha vao nalalaka androany dia nankaty aminao?"
- "Eny ary e! izay resaka izay no iaingantsika" sady nanoratsoratra tao anatin’ilay taratasy ihany i Mihary.
- "Tamin’ny oviana no nandraisanao ilay hafatra, dia nanao ahoana ary ny fandraisanao ilay izy?"
- "Omaly hariva, ary tena nanaitra ny foko tokoa ny tononkalo nalefany, eny e! tononkalon’i Rado ilay izy fa na izany aza! raha fantatrao moa ny hafaliako. Fa niteny moa izy fa hijanona any hanohy fianarana dia vao mainka hanosika ahy hitady azy."
- "Efa niverina nifampiresaka izany ianareo?"
- "… tsy haiko, efa nomeko ny laharan’ny findaiko izy fa mbola miandry foana ny antsony aho hatramin’izao!"
- "Dia ahoana ny fandraisanao izay izy tsy miantso anao izay, sy ilay hoe izy hijanona any?"
- "Tsy kivy aho ka, tsy kivy mihitsy, fa ny saiko aloha dia alefako any aminy foana e! Roa volana latsaka aza izay no tsy nifandraisanay mivantana mihitsy nefa dia nanantena azy aho, koa izy efa fantatro fa salama izao indray ve vao ho ketraka aho?"
- "Mieritreritra azy foana izany ianao, nanofy azy ve nefa?"
- "Marina izany, omaly efa madiva haraina no nanofy azy aho…"
dia notantarain’i Hery ilay nofiny tao an-jaridaina mahafinaritra iny.
- "Fa ity hoy aho no tsy azoko mihitsy ry Mihary an! Maninona ny manodidina ahy no mandrara ahy tsy hifankahita amin’i Alexia?"
- "Fa ny manodidina anao iza moa no tianao hotenenina?"
- "Tsy haiko, tahaka an’i Tahiana ohatra, izy nikarakara ny pasipaoroko ho any an-dafy, izy anefa omaly dia toa nandrara ahy an-kolaka indray ny tsy handehanako!"
- "Ny antony ve? Asa, ny fiantraikany any aoriana no mety mahatonga azy hanao izany. Efa nolazaiko moa ianao fa ny antony nahatonga ahy nanadihady ny momba anao hatramin’izao dia satria miavaka amin’ny maro loatra ny fiainanao sy izay mitranga ankehitriny, Fa raha amin’ny fo sy ny saina tsy miangatra ve ry Hery, raha olon-kafa moa no nanaovanao ireny tany Mahajanga ireny tsy efa nifanome tsiny sy tody aza isika? Fa satria misy tanjona tiako hahatongavana ao, dia mba hanamarinako ilay fehin-kevitra nambarako taminao tany Mahajanga ireny, dia ekeko na dia sarotra aza. Sarotra ny hitahiry izay mavesatra aty am-poko, sy hitazona ny tsiambarateloko noho ny fahadisoam-panantenana nahazo ahy. Eny fa na dia tokony hanana namana aza aho hilazako izany dia tsy maintsy mangina fotsiny, tsy afaka ny haneho izany na amin’iza na iza."
- "Fa izany eo ihany ry Hery fa hiverina amin’ilay fanontanianao teo aho
Maninona hoy ianao no mandrara anao ny manodidina anao. Eny e ! na izaho koa aza mety ao anatin’izany, fa safidy anao manokana io, manome hevitra fotsiny aho, ianao no tompon'ny teny farany."
- "Alaivo sary an-tsaina tsara ity teneniko ity. Eritrereto ho tahaka ny afo ny fitiavanao, manana be dia be mihitsy ianao, tena miredareda be ary lasa manome hafanana ny manodidina anao aza. Ary io fitiavana io dia miredareda tsy hay afenina intsony, hany ka na ireo manodidina anao aza dia tamàna satria ilay hafanàna dia ahafahany mamindro koa eo akaikinao..
Tadidio anefa fa ao anatin’io afonao io dia manana anjara be dia be mampirehitra azy i Alexia. Ka raha toa tokoa moa, i Alexia mihitsy no mamono ny afonao, dia inona no hitranga ? tsy ho faty avokoa izay natsanganao rehetra. Ary na iza na iza mikasa ny hamelona izany afo izany indray, dia ho sarotra satria famoizam-po lalina no hanjo anao. Sarin-teny ihany izay tantara kely izay ry Hery, fa mba tena nodinihinao tsara ve ny ho avinao, « raha miaraka amin’i alexia ianao dia inona avy no mety hitranga, ny zanakao kely roa, marina fa efa manana izay ray sy reny mpitaiza azy izy, nefa mbola eo anivonareo, saintsaino lalina e! Ary ity no farany … " Nisarika ilay vata marobokotra tao ambany latabatry ny biraony tao izy dia nitendritendry litera maromaro, afaka fotoana vitsy dia nasehony an’i Hery ny fahitalavitry ny solosaina teo anoloany:
- "Hitanao ity?"
- "Inona?," hoy i Hery.
- "Jereo fa mino mihitsy aho fa ianao izao no nanao an'ity.
Io fa nivelatra teo ambany mason’i Hery ilay takelaka nametrahany hafatra tao amin’ny www.wanadoo.mg. Hankina izy, tsy nahateny, tsy nahajery akory an’i Mihary fa dia nitanondrika moramora. Vao mainka aza nampitombo ny havesatry ny lanja mibaby aminy ilay seho nataon’i Mihary. Menatra ihany ny anao lahy manoloana ity namany manadihady azy, « kelymaditra », kely maditra tokoa no hany azo hamaritana ny anarany.
- "Tsy hitanao, …izaho aza, tsy niaina io tantaranao io akory tonga dia mahafantatra fa ianao no nanao io! mba fantatrao moa ny fiantraikan’io tantaranao io raha fantatr’i Malala, na Ratrema, ary indrindra moa raha i Alexia?
- "Tena satriko ry Mihary ny hiteny hoe tsy izaho no nanao io, kanefa porofo mivaingana mitohaka amin’ny tendako izao, raha fantatrao mantsy ny fahaverezan-tsaina nahazo ahy tamin’izany."
- "Fantatro e ! fantatro mihitsy ny nanjo anao. Fa ny hafatro dia tandremo tsy ianao indray no hametraka fandrika hamitaka ny tenanao."
- "Ary i Tahiana, « c’est elle n’est-ce pas» ? izy no ilay naman’ny rafozam-bavianao e?" hoy ihany i Mihary namatrapatratra.
Tsy nahaovoka niteny intsony i Hery fa ny masony aza no nanomboka nanganohano. Nitanondrika tahaka ny akoho voakapoka.
I Mihary etsy manomboka lotika ny fony ka ny hamantsipantsika ity namany no hanaparany ny alahelony.
- "Efa azoko an-tsaina mihitsy izay, fa mbola nisalasala aho hatrany Mahajanga satria tsy nambaranao tsara moa, vao nahita anareo teo aho dia nazava tamiko, vao mainka moa izy niteny fa nandrara anao ny tsy handeha dia azoko tsara ny toky fa dia izy tokoa no nanaovanao izao hadalana izao. Tena miala tsiny aminao aho ry Hery, fa namana aho, ary tsy misalasala mandefa ny teny tokony hambarako aminao. Mafy dia mafy ny teniko fa anjaranao ny manadihady tsara izay tokony hataonao."
- "Ka inona ary no tokony hataoko e!," hoy i Hery somary latsa-dranomaso. "Raha tena tsapanao marina mantsy ny halalin’ny fitiavako an’i Alexia."
Isaky ny manonona ny anaran’i Alexia i Hery, dia vao mainka mapirehitra ny hatezeran’i Mihary ka te hamatrapatratra indray ity namany.
- "Ny tokony hataonao? Manana safidy ianao, na handeha na hijanona;
raha hijanona ianao, dia tsy hahita an’i Alexia intsony, izy rahateo moa efa niteny fa hijanona any hanohy fianarana, handeha ianao, dia tsy anao intsony ny tohiny fa an’i Alexia no mandahatra izay tiany. Efa nisafidy izy ny hanohy fianarana dia ho vitanao ve ny hanodina ny sainy amin’ny fanapahan-kevitra nataony?
- "Mihary an ! aoka izay fa mila tsy ho tantiko intsony e!"
- "hay mahatsapa maharary ohatr’izany ihany, manao ny hafa tsy mihevitra izay vokany, tsy amelako kosa aloha fa dia aleo hisaina tsara fa manahirana, enga anie ka hilentika tsara any an-tsainy any izany ary mba hahahendry azy fa tady hiborioka mihitsy ity Hery ity " hoy i Mihary tany aneritreriny tany.
- "Eny ary," hoy i Mihary, "Ampy angamba izay, mino aho fa hainao tsara ny mitandrina ny tenanao, indrindra moa fa misaodisaody eny akaikinao izany i Tatie Tahiana. Fantatro tsara ange izy e! Ary tadidio fa izaho mahafantatra azy talohanao…" sady nitsangana i Mihary nanatona ny varavarana, dia iny koa i Hery nitsangana nanao veloma azy, tahaka ireny akoho voan’ny barika ireny ny tovolahy nivoaka ny biraon'ity namany.
- "Izay ry Hery, tsy maintsy nanao teny mahery tahaka ireny aho fa anjaranao ny manakotsako izay teniko rehetra izay."
- "Veloma ary," hoy ihany izy.
- "Azafady ry Mihary fa i Tahiana ange tsy mahalala mihitsy ny nataontsika tany Mahajanga ka tsy haiko izay hoteneninao azy. "
- "hitantsika eo izany e! inoako fa mahatoky ahy ianao."
sady natolony an’i Hery ny tanany.
- "Veloma ianao Dr Mihary!"
- "Veloma ary."
Dia nifanao veloma tamin’i Tahiana i Hery, ary rehefa lasa ny lehilahy dia…
- "Tatie Tahiana an! afaka miandry kely vetivety ve aloha ianao fa mbola misy zavatra halamiko kely." Nakaton’i Mihary ny varavarana, dia namonjy ny efitra fisasana izy fa latsa-dranomaso nahita an’i Tahiana sy Hery, ary toa sary nibahana tao an-tsainy ny hadalàna nataon’ireo hatramin’izay.
Nifokofoko irery tao izy, ary raha tsy elaela tsy niverina. Rehefa tony tsara izy vao niverina namoha indray ny varavaran'ny biraony sady nampandroso ity nenitoany.
Vao vita ny asan'i Mahefa dia ny hamonjy ny tranony no nahamay azy indrindra. Naleony aloha tsy nifampiantso an-telefaona intsony ambara-pahatongany any aminy. Ahoana ary hoy izy niasa sainy mafy no ahafantaran’i Alexia an' izany, izahay sy Malala anefa nifanaraka tsara fa mbola tsy amin’izao fotoana izao no hilazana izany aminy, sa i Ratrema ve no tsy mahazo resaka?
Raha fantatr’i Alexia ve izany tsy izaho aloha no nantsoiny voalohany, marina fa mety hampikorontana ny sainy ny tampoka ny fahafantarany fa izaho no tena rainy, nefa dia ho sahin’i Malala ve ny hanao izany?
Atao ahoana, mila raharaha mihitsy letsy ialahy ity ry Mahefa! Hoy ihany izy nanohy anakampo.
Misy zavatra marobe mbola tsy mazava amiko hatramin’izao ny tantaran’ity fianakaviana ity? Fa inona marina no tena olana?
Tamin’izaho tany Antananarivo mantsy, ilay nifankahita voalohany tamin’i Malala, dia ahoana ary no tonga dia nahasahiany tonga dia niray tamiko nefa izy aza tsy mahafantatra ahy akory. Izy anefa olona manambady izao. Mety tena nisy olana mihitsy izany teo amin’ny fiainan-tokantranony. Tsy mifanaraka ve izy sy Ratrema? Fifanandrifian-javatra koa tsy nisy tahaka iny. Marina mafy.
Na hanontany fahazato sy arivo aza aho ny amin’izay fiainan’izy rehetra, dia tsy maintsy hisy foana ny marina tsy fambara, nefa tokony ho fantatro.
Dia ahoana koa ilay silipo tavela tao an-dakoziako indray mandeha iry? inona koa no nitranga tamin’iny. Asa mihitsy, fa olona tahaka ny inona marina ity Malala ity e! Ny toetrany aloha dia mifanipaka amin’i Vololona, ny vatana sy ny endrika no maro ifandraisana, fa ny fomba fisainany, na ny toetrany dia tena mifangarika be mihitsy ary izay no mahatonga ahy tsy hihevitra ny hiray aminy intsony. Izy aloha dia ahatsiarovako an’i Vololona mihitsy e. Ampy ho ahy koa anefa i Alexia.
Misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy e. Ohatran'ny hoe noterena an-kolaka izany i Malala handeha aty hanampy sy hikarakara an’i Alexia. Marina fa zanany saingy tsy naterany, fa na dia izany aza anefa, izy no efa solon-dreniny. An an ! tena tsy hiditra amin’i Malala intsony aho kah. Izy raha teo koa moa vadin’olona! sshhh aleo ho any fa manahirana. Hoy ihany i Mahefa miresaka amin'ny tenany sady ny niha nanakaiky ny tranony rahateo koa ny diany.
Vao tafiditra ny tokontany i Mehefa dia najanony teo ivelany ny fiarany. Vao teo an-dalantsara izy dia tsinjony i Malala sady mitrotro an'i Cynthia no misonanina tsara ery eo ambony seza lava mijery fahitalavitra.
- "Ahoana Malala, nanao ahoana ianareo rehetra tato izay?"
- "Tsara daholo ka, fa ahoana ? tsy nisy naninona mihitsy izahay."
Gagagaga i Mahefa, fa misy inona ary ato an-trano? Hoy izy sady somary niherikerika nijery ny manodidina azy izy. Te-hitantara mafy amin’i Malala izy ny amin’izay resaka nataony tamin-dRatrema fa toa niahotra kely aloha.
- "Ary i Alexia izay moa aiza izao?"
- "Ao amin’ny efitranony ao izy ka, mety matory angamba, fa efa elaela izy izay tsy nidina."
- "Fa misy inona?"
Tsy niteny aloha i Mahefa, nifampijery fotsiny izy sy Malala.
- "Aleo aho aloha ho any aminy e!"
Dia gaga i Mahefa fa toa tsy nahoan’i Malala akory ny resany, tahaka ny tsy mahalala zavatra mihitsy ny anao vavy. Fa misy inona ary? Hoy izy vao maika sahiran-tsaina sady namonjy niakatra ny tohatra nankany ambony rihana.
Nodondominy mora aloha ny varavarana, tsy nisy namaly, dia nosokafany fa tsy nihidy. Io Alexia matory eo ambony fandriana. Nanatona izy hijery raha matory marina tokoa. Hay, indro ity "zanany" mipitrapitra fotsiny tsy miteny tsy mivolana fa toa lasa saina lalina. Ny masony bongon’ny ranomaso sady mifariparitra mena. Somary nitodika niakatra izy raha nahita an’i Mahefa, dia niarina nefa nanondrika ny lohany teo ambony lohaliny indray.
- "Alexia," hoy i Mahefa, "maninona ianao anaka?"
Tsy namaly aloha i Alexia fa toa nisento lalina vao nanokatra ny vavany.
- "Mavesatra amiko loatra, mila tsy ho zakako intsony ny fiainako," hoy izy tamin’ny feo vizana dia vizan’ny toloko.
- "Alexia an ! izaho eto afaka hanampy anao hanamaivana izany. Mba tantarao amiko izay manahirana anao e!" Sady namonjy nipetraka teo ambony fandriana koa i Mahefa namihina ity zanany teo amin’ny sorony roa.
-Raha mba teto mantsy Papa dia nitony kokoa ny foko, izy hatrany no manana teny hentitra hamahana izao olako izao. Raha mba nihaino azy aho hatramin’ny voalohany dia mety tsy nandalo izao lanja mampianjera ahy izao. Tena izao fao tena tsapàko ny dikan’ilay teny hoe « ny ana-dRay aman-Dreny toy ny tsipak’ombalahy, ka raha mahavoa mahafaty, raha tsy mahavoa mahafanina».
Mahefa an! hoy i Alexia, iza no olona afaka hanampy ahy? sady nibanjna vetivety ny mason’ity "rainy" izay tsy fantany akory izy.
- "Aza manao izany ianao ry Alexia an! nifampiantso teo izahay sy Ingahy Ratrema ny amin’ny olanao, izay no antony nahatongavako aloha. Tantarao e! Inona avy izany marina fantatrao rehetra izany, naniraka ahy mantsy ny rainao fa tsy mitombin-tsaina mihitsy izy any Antananarivo, tonga dia izaho no nametrahany ny hafatra hiresaka mivantana aminao!
- "Nitady ny marina aho, dia nahita tokoa, kanjo ilay marina fantatro toa tsy ho zakako akory ny mibaby azy, nefa tsy azoko alana ato an-damosiko intsony. Nahoana re no mianjady amiko izao rehetra izao e!"
- "Alexia an ! avia horohako izany zanako izany," sady nalefany teo amin’ny takolany ny molony!
Izay, oroka vetivety izay dia tsapan’i Alexia nandalo teo amin’ny takolany toa nanambara fitiavana taminy. Hafanana vetivety, toa nampitraka azy koa.
Nifampijery maharitra izy mianaka. Tsy nifampiteny fa toa nifampita hafatra, nefa hay hafatra tsy nifankahazo.
I Mahefa nihevitra fa efa fantatr’ity zanany fa izy no rainy, I Alexia kosa indray toa nihevitra fa ilay fitiavana nitsiry ao aminy hoan'i Mahefa iny nohamafisin'ny oroka teo amin'ny takolany teo iny. Nampanantonin’i Alexia mora tamin’ny molotr’i Mahefa ny azy, nakimpiny ny masony sady nalefany tsimoramora ihany.
Niala tampoka nefa i Mahefa, tsy sahy niteny, nivarahontsana amin’ity nitranga. Vao nisokatra ny mason’i Alexia tsy nahazo izay notadiaviny, dia nifampijery indray izy mianaka.
- "Mahefa an! fa maninona e? sady notazominy ny ny takolak’ity lehilahy hanorohany indray ny molony.
-An, an! Aoka ry alexia, tsy sahiko ny hanao izao, tsy mety amintsika.
Somary kivy ny anao vavy, ny tanany efa mamihina tsara ny saokan’i Mahefa, somary natosiny hitsilany ity «rainy» sady noteneniny hoe:
- "Ianao ihany no fantatro fa afaka hanaisotra izao vesatra mila hampitolefika ahy izao; Fantatrao tsara fa mitoky fitiavana aminao aho ary ny fanomezanao ny fitiavanao ho ahy fotsiny dia ampy hanala ny adin-tsaiko. Mahefa an ! aza asiana sakana ny fiarahantsika." Sady niezaka mafy ny hanoroka an’i Mahefa ihany i Alexia. Niezaka mafy haingana araka izay azony hatao hanala an’i Alexia teo amboniny anefa i Mahefa. Nitontona tery ambony fandriana ity zanany vavy. Tsy hitan’i Mahefa zay natao. Niarina izy, toa tsy tantiny indray ny nahita an’i Alexia manomboka nifokofoko mafy mila hitomany.
- "Alexia an! tsy fantatrao tokoa ny marina!
- " An, an ry Mahefa an! ny marina dia izao, menatra ny amiko ianao nefa tianao tokoa aho fa afeninao. Tsy sahinao aseho na amin’iza na iza, eny na dia aminao ihany aza!"
- " An, an, tena diso hevitra ianao ry Alexia an ! tsy afaka hanao izany aho" sady nigogogogo nitomany koa i Mahefa. Nandalo tao an-tsainy ny mafy niainan’izy sy Vololona tamin’ny fisarahana tampoka efa ho roapolo taona lasa izay.
- "Tsy afaka manao izany aho satria ny marina tokony ho fantatrao dia izao " IZAHO NO RAY NITERAKA ANAO…," hoy ihany Mahefa sady nidradradradra nitomany izy.
- " RAY NITERAKA AHY, RAY niteraka ahy, izany ve ??? ray niteraka ahy……………"
Nihodina tamin’i Alexia ny tany aman-danitra ; toa nivalombalona teo anoloany izay sary rehetra mba hitany, tsy tantiny intsony fa nidaboka teo ambony fandriana indray izy dia tsy nahatsiaro tena intsony.
Tamin’izay, nisokatra ny varavarana, iny i Malala niditra sady nahare izay notenenin’i Mahefa farany. Taitra izy nahita an’i Alexia fanina sy nidaraboka teo ambony fandriana. I Mahefa latsa-dranomaso toa tsy nahita hatao amin’ity zanany.
Very hevitra i Malala. Efa fantany fa na ho ela na ho aingana dia hiboraka ny marina, nefa ny fiantraikany no tsy nampoiziny mihitsy.
- "Mahefa an! aza variana mitoloko eo ity ianao e! safotra ange i Alexia e! Jereo ity izy! " Sady nokosokosehiny ihany ny tanan’i Alexia rehefa avy nareniny teo ambony fandriana.
- "Mety tsara izao ataonao izao, tsy maintsy maka rivotra madio tsara izy aloha. Aleo voahaina ny varavaran-kely. Nefa tsy mety, ririnina mamirifiry izao, tsy azo atao mihitsy. Tohizo ihany aloha izao ataonao izao fa haka fitsofan-drivotra any ambany aho mba hampivoivoy tsara ny ato anaty efitra."
Vetivety dia niverina izy, natsatony haingana tamin'ny herin'aratra dia nalefany. Novelombelomina teo i Alexia. Nakàna ranomanitra notohofana teo amin’ny orony. I Malala koa moa tamin’io taitra tampoka tamin’ilay nitranga teo, ka toa fanimpanina izany. Mbola naharin-tena tsara ihany aza anefa izy na dia izany aza. Rehefa hitany fa eo am-pelatanan’i Mahefa tsara ity zanany dia lasa naka toerana aloha izy. Izy eo ampipetrahana eo no tsinjony ny fidainy. Tonga dia ny hiantso an-dRatrema avy hatrany no nandalo tao an-tsainy voalohany.
Izy ndeha hanindry ny larahan'ingahy Ratrema iny anefa no tsaroany fa hay moa any ambany rihana ny poketrany misy ny laharana tiany antsoana. Nitsangana izy nidina tany ambany haka azy. Asa anefa na dia nanao ahoana fa ny laharan’ny fidain'i Hery no sendra azy. Tapa-pevitra tampoka teo izy fa hiantso an’i Hery, dia notsindriany ilay laharana ary dia nantsoiny.
Tafiditra ny antsony saingy indrisy fa « Ce numéro n’est plus en service, Efa tsy miasa intsony tompoko io laharana io.» no feo henony tao sady niverimberina foana toa nandreraka ny sofiny. Tsy hitan’i Malala izay natao, toa manampy trotraka azy koa ilay hafatra vao henony teo. Naninona i Hery hoy izy nanomboka niasa saina mafy. Nidina tampoka ny tosi-drany, nihafanina izy ary tsy ela taorian'izay dia nidaraboka tamin’ny tany ka nanjera ilay vazy tsara tarehy tsy lavitra azy teo. Taitra i Mahefa tany ambony rihana naheno ilay dobodoboka tany ambany rihana. Nihazakazaka izy nivoaka ny efitra nisy an'i Alexia sady namonjy nidina. Fa dia inona loatra ary ity miseho androany ity hoy izy aneritreritra sady niezaka nanarina an'i Malala.
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 5:: Hametraka hevitra (1) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
Tsy nisy nifampiteny aloha i Hery sy Tahiana ! Nifampijery tsara. Farany tsy naharitra ny tovolahy fa nametraka fanontaniana:
- "Fa inonao i Dr. Mihary ry Tahiana?"
- "Dr Mihary, hay izay no fiantsoanao azy, ao amin’ny fianakaviana dia i Nomena no iantsoanay azy. Zana-drahavaviko izy. Tsy tena rahavaviko fa zanak’olona mirahavavy kambana izahay. Hay ve mpiara-mianatra ianareo taloha e!
Tena tsara kosa izany, tena tsara mihitsy…"
- "Ary tsy fantatro mihitsy izany, nefa izahay sy Mihary aza efa niara-nianatra ela fa tsy tandritandriko mihitsy ianao hatramin’izay."
- "Ka izay ilay tany boribory re ry Hery an," hoy ity iray nanakatra ny saokan’i Hery.
Tsy nisy nifampiteny intsony aloha fa samy nieritreritra izay teny tokony hambarany. I Tahiana amin’io toa nazava taminy ny lalan-kombàna. Iza no nanampo hoy izy aneritreritra fa mifankafantatra i Hery sy ity zana-drahavaviko. Ho tafaray mihitsy ny tia sy ny manina raha izany hoy ihany izy nanohy ny resany samy irery tany anatiny tany.
I Hery kosa etsy, toa sadaikatra ihany, na ho ela na ho aingana tsy maintsy ho fantatr’i Mihary fa i Tahiana anie ka efa niaraka taminy ary tsy in-dray mandeha fotsiny ihany. Ary izy ilay naman’ny renin’i Alexia. Tsy voalazany amin’ny antsipirihiny mantsy na ny anarana na ilay mety ho bikan’i Tahiana, fa dia amin’ny ambangovangony ihany no nitantarany azy tany Mahajanga. Ary toa tsy sahiny koa ny hilaza amin’i Tahiana fa ity zana-drahavaviny anie ka …
Dia angamba ataon’i Tahiana fihomehezana aho hoy izy miady saina irery teo ny amin'ny nilazako taminy fa efa niova aho, hay, vao nifindra lasy vetivety dia efa tafa roboka tanatin’ny rano lalina indray. Raha fantany tokoa ny marina, vao mainka angamba hataony toto-afo ny fandavany ny handehanako hitady an’i Alexia ? Very hevitra teo izy… Nony kelikely,
- "Tahiana an ! Tena mahatsiaro nanenina ihany aho nanao teny mahery taminao omaly. Aza tsiny re fa vava tsy ambina e ! Tena mampanantena aho fa tsy hanao ny tahaka ireny intsony."
- "Tsy maninona izany Hery an ! na izaho koa aza nanao fihetsika tsy voahevitra. Eny e ! Samy diso isika ! Tsy mampaninona izany ! Sady tsy tsaroako intsony ireny fa nahafinaritra ahy loatra ny nataon’ilay Dadafaranao androany izay. Tsy maninona mihitsy re izany ry Hery an!"
- "Eny ary e! fa te hiresaka zavatra hafa indray aho! Ka atao ahoana moa fa ny tany boribory araka ny voalazanao teo, zana-drahavavinao izany i Mihary, Nomena moa ny fiantsoanareo azy. Dia mba angatahiko ianao mba hijanona tsiambaratelontsika ireny nitranga hatramin’izay ireny an!" hoy i Hery, somary menamenatra. Toa hahatsiaro afa-baraka amin’i Mihary aho mantsy raha fantany izany!"
- "Ahoana moa no ahafantarany izany raha tsy misy milaza azy, fa aza matahotra ianao fa ataoko ho toy ny tsy misy tavela na dia pitiny kely aza ny momba an'iny eh. Sa tsy izany?" sady noraisin’i Tahiana ny tanany.
Izao ary ry Hery an ! Mba manitikitika kely ny saiko ihany ity zavatra ity, fa ianao sy Nomena, Mihary moa, fa tena mpinamana tokoa ve ianareo taloha sa… ? Toa hitako amin’ny masonao mijery azy teo fa efa misy rohy hafa mihitsy ifandraisanareo ! Sa diso aho?"
- "Tahiana koa ! sshhh ! ahoana koa aza no andefasanao saina lalina amin’izany ? "
- "Ka inona ary no ataonao aty aminy izao ka! Sa hitsabo tena ianao! Tahaka ny efa nandrasany izany mihitsy anie ianao teo e! Ohatran’ny hoe: nahazo « rendez-vous » efa hatry ny ela!"
- "Ppffff ! ianao koa!" sady nakifik’i Hery ny tanan’i Tahiana.
- "Hery an ! raisiko ho toy ny zandry tiako ianao ary ataoko ho toy ny zanako ihany koa, sady naveriny noraisina ihany ny tanany, ohatran’ ny manana tsindrimandry izany foana aho fa mety hanimba anao anie ny handehananao any an-dafy any e ! Raha toa ka tena mitady anao marina ve i Alexia dia hiteny hoe hijanona any izy hanohy fianarana? Diniho tsara aloha Hery an! Sady sao dia varivarian’ny lavitra ianao ka tsy mahita ny ambany maso?"
Tamin’izay indrindra no nisokatra ny varavaran’ny efitra nisy an’i Mihary, ny masony tonga dia any amin’ny tanan’i Hery sy Tahiana mifandray sady mifanome hevitra. Vao nahita izany koa i Hery dia nakifiny toy ny tsy teo ny tanan’i Tahiana. Tsy niteny aloha i Dokotera, fa rehefa lasa ilay olona nozahany dia nanatona azy ireo izy.
- "Elabe Tatie Tahiana no tsy hitako, tamin’izaho taty efa ho roa taona izay no nahitako anao farany." Dia nifanorokoroka teo izy mianaka, i Hery kosa noraisiny tanana fotsiny. Avy eo izy naka seza teo akaikiny.
- "Fa dia gaga mihitsy aho, hay ve ianareo ireto ka mifankafantatra tsara e!"
- "Eny akia ry Nomena an ! izaho no nanampy an’i Hery niakarakara ny pasipaorony fa tsy andriny mihitsy izao handehanana any an-dafy izao."
- "Hay ve, hoy i Mihary, tsara be izany ka! izy moa ry Hery dia nenitoanay, zanak’olona kambana izy sy Mama."
- "Hay izay no nahatsiarovako endrik’olona mitovy be amin’i Mamanareo ; tena eto vao tsaroako ilay izy," hoy i Hery.
- "Eny e ! satriko tokoa hifampitafa sy dinika eto foana fa aleo aloha aho hiresaka amin’i hery manokana atsy amin’ny biraoko, dia mitohy ny tafa antsika sy Tatie rehefa avy eo ? Izay aloha fa rehefa avy eo Tatie an!"
Nipia-kelika i Tahiana, tena andro mahafinaritra mihitsy ny androany raha izao. Ho mora aminy mihitsy ny hampiditra an’i Hery amin’i Mihary, ary tena tojo amin’ny faniriany amin’izay izy izao. Ho very any amin’izay ianareo ry Ratrema mianakavy, ataovy izay tianareo fa i Hery, hono, tsy any intsony.
<<< ho reseko lahatra fotsiny ikala Nomena dia hanaiky ho azy ity Hery ity. Mino aho fa vetivety dia hadinony io faniriana tsy misy fetra hitady an’i Alexia io !. Veloma ry Malalatiana fa dia tanteraka amin’izay ny faniriako rehetra >>>
Tany amin-dRatrema kosa tamin’io fotoana io,
- "Allô ! Allô Malala an!"
- "Ratrema, manao ahoana izany vadiko izany? Inona ny vaovaonao, tena efa saika hiantso anao mihitsy aho izao kanjo, ialahy no niantso ahy."
- "Salama tsara ve ianareo efa-mianaka izay. Tsy misy olana an?"
- "Hatramin’izao aloha dia tsy misy mampanahy, i Alexia efa mandroso ho tsara, izy mianadahy kely koa tsy maninona ka. Izaho rahateo moa tsy dia mitondra azy ireo mivoaboaka loatra, fa sao dia tsy mahatanty ny hatsiaka."
- "Ary i Alexia ve izay efa afaka mivoaka ny trano."
- " Tsy dia mbola afaka mihetsika ato aloha izy e ! i Mahefa rahateo moa mbola tsy mamela azy handeha lavitra, fa tsy maninona izahay ka, tsara karakara daholo. Io anie i Alexia raha hiresaka aminy ianao e!"
- "Hay, tena tsara izany, fa toa mahare ny feon’i Toky koa aho izany, angaha efa be resaka kely nedala."
- "Ie ! tena mibadabada foana izy, aleo tohofako amin’ny sofiny ny finday e!"
- "Toky !, Toky kely, manao ahoana letsy ialahy?"
- "Papa, Papa," hoy ilaikely mamaly ny antson-drainy. Sady miramirana ery, falifaly sy mbitabitaka fa tonga dia fantany ny feon-dRatrema.
- "Hendry tsara ialahy an! dia manaiky tsara an’i Neny."
Ren-dRatrema tsara ny hehin-jaza nataon’i Toky, somary nalahelo kely izy te hamihina an-janany mafy, fa any lavitra tsy taka-maso moa ka atao ahoana, soa fa nisy ny fifandraisana an-telefaona mba ahafahana mifampita mivantana ny vetsovetsom-pony. Notrotroin’i malala i Toky sady noraisiny indray ilay finday.
- "Ratrema an ! malahelo anao koa ange aho e!" Somary nihataka kely teo amin’i Alexia izy dia nanohy hoe: "Te-hody ange aho e ! Tena malahelo ny trano, ny havana sy ny namana rehetra ; marina fa mety hahafinaritra ny manao Krismasy aty Paris fa rehefa tsy eo ialahy dia toa banga be izany ny fiainako."
- "Eny ry Malala an ! tena izaho koa te ho eo anilanao, fa tsy maintsy mbola mihafy kely aloha isika. Rehefa salama tsara i Alexia dia afaka miverina amin’izay ianareo fa ianao aloha no azoko antoka hahay hanohana tsara iny zanantsika vavy iny. Raha eo izy ve dia azonao omena ahy?"
- "Ie ! io izy ka…" sady natolony an’i Alexia ny finday.
- "Allo Alexia, manao ahoana izany zanako tsy foiko izany!"
- "Papa an ! efa mihatsara aloha e, efa tsy dia maninona loatra, misy manaintaina ihany indraindray fa i Profesora Mahefa koa mijery sy manadihady tsara izay mahazo ahy. Aza manahy ny amin’ny fahasalamako fa efa tsara karakara ny zanakao e!" Sady nitsangana i Alexia no nandao azy telo mianaka, lasa izy namonjy ny efitranony dia nihidy irery tao niresaka tamin-dRatrema.
- "Papa an ! raha fantatrao mantsy ny alaheloko! hoy i alexia nanomboka nifokofoko, Papa an!
- "Alexia an ! maninona ianao e ! aza malahelohelo izany zanako izany, tsy tantiko ny maheno anao malahelo izany, na izaho aza aty tena miaritra ny mafy mihitsy.
- "Papa an!" hoy ihany Alexia nanomboka nitomany,
- "Fa maninona e ! Fa maninona ianareo lehilahy no tsy maharitra ny fakam-panahy mihitsy?"
- "Fakam-panahy toy ny inona no lazainao anaka," hoy Ratrema somary hendratrendratra.
- "Tsy mba noheveriko ho izaho no hiharan’izao vesatra mila tsy ho tantiko izao, kanjo ny foko toa miha-maratra mila ho vaky hatrany. Fa tena tsy azonareo atao mihitsy ve Papa ny manda ny langolanom-behivavy manjo anareo?"
- "Alexia an!…"
Tsy nahateny aloha Ratrema, tsapany ho niletika tany an-tsainy lalina tany ny tenin-janany. Teo vao tsapany ny fahadisoany tamin’ny nataony tamin’i Corine andro vitsivitsy monja izay.
- "…Aza tapahinao aloha ny teniko, fa… izay ny fianana ry zanako malala, mbola tanora ianao ankehitriny fa rehefa hiroso amin’izany fiainana izany dia handalo aminao koa izany… mbola feno fitiavana ianao nefa voavadika…
Fa nisy inona anefa, ambarao, nisy naninona izany zanako izany?"
- "Papa an ! fantatro avokoa ny tantara rehetra. Fantatro amin’ny antsipirihany ary hafatra mazava no voaraiko. Eto vao fantatro fa hay marina ilay hira hoe mitovy avokoa ny lehilahy rehetra. Mila tsy ho tantiko intsony fa aleo aloha faranana ny resaka Papa an ! Misamboaravoara be ny foko, mila hanefika ahy ny fahadisoam-panantenana. Veloma aloha Papa an!"
- "Alexia, andraso aloha, aza tonga dia tapahina fa eto foana aho izany zanako izany. Raha misy ilanao ahy dia aza misalasala mihitsy miantso ahy na amin’ny fotoana inona na inona. Zanako tiako indrindra ianao. Veloma izany zanako izany."
Hankona Ratrema, fantatr’i Alexia avokoa ny tantara rehetra, fantany izany ny tena rainy, fantany izany… fantany daholo marina ve ? Ahoana nefa no nahafantarany izany, sa i Malala indray no tsy nahatam-bava tao? Hoy i Ratrema miady saina irery tamin'ny tenin-janany.
Aleo aloha antsoina i Mahefa.
- "Allô ! Profesora Mahefa an!"
- "Allô ! iza moa izao azafady?"
- "Ratrema e! manao ahoana ianao Profesora?"
- "Hay ingahy Ratrema, miarahaba anao. Misy ilanao resaka amiko angaha?"
- "Ie ! tiako ho fantatra fotsiny, fa angaha efa fantatr’i Alexia fa ianao no tena rainy? nifampiresaka mantsy izahay dia tena nalahelo sy diso fanantenana mihitsy izy! asa, tsy fantatro?"
- "An an an ! tena efa nifanaraka mihitsy aza izahay sy ny vadinao fa tsy hilaza na amin’iza na iza izany. Nefa tsy fantatro, fa ahoana nefa hoy i alexia?"
- "Fantany avokoa hono ny tantara rehetra."
- "Izany ve ! Aleo fa hifampiresaka amin’i Malala aho raha izany. Mba tena tsy azoko mihitsy no nahafantaran’i Alexia ilay izy. Antsoiko ianao ry Ingahy Ratrema raha vao fantatro avokoa ny zava-mitranga an ! mandra-piresaka ary!"
Mila ho vaky ny lohan-dRatrema, nenina no tany aminy tamin’ny nataony tamin’i Corine, tena marina ny nolazain-janany hoe ny lehilahy tsy maharitra fakam-panahy, fa langolangoin’ny vehivavy dia roboka tokoa. Nefa mahavaka ny sainy koa ity fahadisoam-panantenana manjo an’i Alexia ity, raha mba tany mantsy izy dia afaka nampitony na dia kely fotsiny aza ity zanany tsy foiny.
Nazotozoto ery i Hery nandeha namonjy ny toeram-piasany ny ampitson’iny. Nanao ny tatitra tamin’ny iraka nataony tany Mahajanga izy aloha, ary fantany fa tsy nametraka ny olana teo anivon’ny orinasa ny dia izay nalehany. Tomombana tsara avokoa ny iraka nampanaovina.
Tsy andriny intsony nony avy eo fa vao nahita solosaina nisokatra i Hery dia nijery ny tranonkala no nataony voalohany. Nosokafany ny mailaka nifanaovany tamin’i Alexia omaly, tsy nisy hafatra voaray. Dia lasa indray ny lehilahy nanoratra vetsovetsom-po vaovao hatolony an’ity olon-tiany lavitra azy.
raha fantatrao mantsy ny alaheloko tsy mahita anao,
dia hitady ahy koa ianao ary fantatro fa hifanena eny amin’ny habakabaka sy ny lanitra eny isika. Irery aho fa tsy eo ianao ! Manina ilay tiako aho, te-hitady anao, ary ho avy tsy ho ela fa ny saiko efa any aminao tanteraka
Alexia, hitady anao any aho,
hitady anao na aiza na aiza misy anao !
Ho avy tsy ho ela arak’izay azoko atao !
Raiso eo an-tratranao ity foko manirery !
Tsy kivy fa velom-bolo hatrany i Hery, tena lasa aina namelombelona azy ilay mailaka farany nalefan’i Alexia. Tsy andriny mihitsy ilay antso avy any aminy fa efa nomeny tamin’ny mailaka ny laharan’ny findainy. Raha nisy ny zavatra tsy niala teny aminy dia iny findainy iny. Ary raha maneno iny dia hikoropaka izay tsy izy ny lehilahy hamaly ny antso ao.
Tonga ihany anefa ny hariva, tsy nisy na inona na inona, ny tranokala no nosokafany matetika fa tsy nisy hafatra na dia iray aza, eny fa na dia izay avy amin’i Tiana koa. Ilay finday rahateo na dia kitika kely monja aza tsy nisy naneno.
Tsy nataony nahakivy anefa izany, azony an-tsaina ihany ny manjo an’i Alexia. Mety ho sahirana na koa tsy afaka loatra ny hikitika solosaina ka handefa mailaka isan’andro izao. Izy rahateo moa mbola tsy tena tomombana ny fahasalamany. Tsy mampaninona izany, mbola misy foana ny fanantenany.
Vao nirava izy dia nahatsiaro fa tokony hihaona amin’i Mihary, efa hafatr’ity farany rahateo fa tsy maintsy misy fotoana hifampiresahany mikasika ny fiainan’i Hery. Tsy tian’i Mihary hofaranana mantsy ny fanaraha-maso, indrindra ny fiovan’ny toe-tsain’i Hery tato ho ato.
Lasa izy namonjy ilay birao efa natoron’i Mihary azy. Hitany tsara ny toerana fa ny tena misy ilay birao kosa no tsy maintsy nanontaniany ny mpiandry ny lalantsara ;
Niakatra tany amin’ny rihana faharoa izy aloha, dia niditra varavarana lehibe, olona vitsivitsy no tao, ny sasany bevohoka, mbola tanora koa ny hafa fa saika vehivavy avokoa. Dia variana moa ny sasany mijery an’ity tovolahy sady manam-bika sy tarehy. Nipetraka teo amin’ny efitra fiandrasana aloha i Hery rehefa avy nifampanontany izay olona eo alohany hatao fizahàna. Dia niandry izy, namaky ny revio teo anoloany. Nifampijery ihany izy amin’ireo vehivavy hafa fa toa tsy nahoany akory. Vao nisokatra ny varavaran’ny efitra fizahàna ny marary dia indro i Mihary manao veloma ilay olona vao avy nozahany. Aron’akanjo fotsy no notafiany, ao anatiny ao lobaka mena manifinify dia pataloha lava arahin’ny kiraro mainty somary misy vodi-tongotra. Nitsiky izy nahita an’i Hery, sady toa faly aoka izany. Nifampiarahaba lavitra izy roa. Dia nampidirin’i Mihary ny olona manaraka, dia tahak’izay foana isaky ny 15 mn.
Olona iray sisa no teo alohan’i Hery, injay fa misy olona mandeha any an-dalantsara any, re ny figadogadon’ny tongony ary fantatra avy hatrany ny kiraro avo vody tongotra anaovany fa manako manenika ny rindrina efatry ny lalantsara. Mirindra tsara ny figadon’ny tongony, manakaiky ny efitra fiandrasana dia niditra ilay varavarana lehibe:
Taitra i Hery nahita ilay olona, ilay olona koa toa nitsamboatra tampoka nahita an’i Hery.
- "Hery, fa maninona ato koa ianao?"
- "Oay, Tahiana, tsy nihevitra ny hahita anao aty aho, fa angaha misy tsy salama no…"
- "Non ! salama tsara aho ka, resaka hafa mihitsy no andehanako aty ! Ary ianao, fa angaha ianao misy aretina nahazo anao no aty no dokotera andehananao?"
- "Zavatra hafa koa ka ! tsy resaka aretina fa…"
Toa niahotra tampoka i Hery, tsy sahy nilaza tamin’i Tahiana. Ity farany rahateo tsy nahalala izay nitranga tany Mahajanga na dia sombin-tantara iray aza ! Naleony aloha nangina.
Vao tafapetraka dia hoy i Tahiana nanohy :
- "Tokony hotantaraiko anao ihany fa niara-nisakafo tamin’i dadafaranao ange aho io atoandro io e! Mahafinaritra kosa ny Dadafaranao koa, izy moa tsy mety antsoina izany Dadafara izany, fa sady mahay mampiresaka no mahay mihaino izay teneninao, mahay mikarakara ihany koa. Noheveriko fa saro-kenatra be ange izy tamin’ny voalohany ireny izaho naterinareo tany am-piasàna omaly ireny e! Fa hay izy tena mahafinaritra kosa ko!
Vao tonga tao am-piasàna aho io maraina io dia efa nandrasany tsara teo akaikin’ny varavarana, dia hoy izy:
- "Vehivavy tsara tarehy toa anao izao, hono, dia mendrika omena voninkazo tsara tahaka itony." Dia gaga be aho, izy aloha tonga dia tadidiko tsara mihitsy, fa tena gaga aho notolorany ilay voninkazo; tsy nampoiziko kosa aloha e ! Sady tiako ilay voninkazo.
- "Dia avy eo ahoana," hoy i Hery lasa liana amin’ny tantaran’i Tahiana.
- "Dia hoy izy hoe "fohy ny fotoana ifanenako aminao izao fa raha sitrakao dia hotohizantsika ka manasa anao aho hiara-misakafo isika rahatoandro!"
Dia tsy haiko fa lasa nahatoky be azy izany aho, toa teny tsotra nefa mitory fahatokiana. Eny e! izay mihitsy, dia nifanao fotoana izahay, izaho moa nandeha niasa, ilay voninkazo mbola mipetraka tsara ao anaty biraoko ao.
Dia tonga ny atoandro, iny i Fano efa miandry ahy teo am-baravarana indray. Dia lasa izahay, resaka izany nataonay izany, tena mahafinaritra ahy izy! Tsy lainga lainga!"
- Tsara izany ka," hoy i Hery, <<<il était temps aussi, ouff>>> dia nanao ahoana ny tohiny?
- "Ka izaho aty izao fa tsy maintsy nofaranana ny resakay, dia mbola nifanome fotoana indray izahay amin’ny faran’ny herinandro, sady efa akaiky Krismasy koa."
Nisento tokana i Hery, faly am-po izy, tahaka ny nisy valiny ny fisasarany rehetra ;
Tampoka anefa, nanontany indray i Tahiana:
- "Mbola tsy novalianao tsara ange ny ataonao aty e?
- "Izaho ve," nisalasala kely i Hery, namako i Dr Mihary ka, namako mpiara-mianatra tamiko izy tany amin’ny kilasy famaranana! Dia fantatro fa efa tafaverina izy dia mba mamangy azy aho!"
- "Hay ve? hay ve namanao izy e! Tsara kosa izany! Tena tsara mihitsy. "
- "Fa ahoana? Fa ahoana no ialazanao fa tsara izany?"
Tamin’izay no nisokatra indray ny varavaran’ny efitra fizahana, faly ery i Mihary nahita an’i Tahiana koa, ary gaga izy fa tena mifampiresaka be aminy i Hery. Nanontany izy avy eo:
- "Fa angaha mifankafantatra ianareo?"
- "Ie !" hoy izy roa niara-namaly sady nifampijery.
- "Andraso aloha handray ity olona hozahako farany ity aho dia mifampiresaka isika ! Izay an! rehefa avy eo!"
Tsy nisy nifampiteny aloha i Hery sy Tahiana ! Nifampijery tsara. Farany tsy naharitra i Hery fa nanontany :
- "Fa inonao i Dr Mihary ry Tahiana?"
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 5:: Hametraka hevitra (2) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)